Guddoomiyahii Maxkamadda Sare Ee K/galbeed Oo Xilkii Laga Qaaday – Hornafrik Media Network
Guddiga adeegga garsoorka K/galbeed oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxay sheegeen iney xilkii ka qaadeen guddoomiyahii maxkamadda sare ee maamulkaasi, Sheekh Axmed C/laahi Xuseen Fanax oo dhowaan magaaladaasi ka sheegay in maxkamadda shaqadeeda loo wareejiyey degmada Afgooye ee Sh/hoose.
Waxay guddigan sheegeen in warkii uu sheegay guddoomiyaha uu yahay waxbo kama jiraan, waxaana ay tilmaameen in khilaaf horey uga dhex jiray iyaga iyo guddoomiyaha uu xalliyey madaxweyne Shariif Xasan.
Guddiga ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha ay xilka ka qaadeen inuu ku kacay falal ka dhan ah sharciga, sida in lacag uu weydiistay dad dan yar ah oo cadaalad raadis ah.
Maxamuud Sheekh Xasan oo kamid ah guddigan ayaa sheegay in dhibaato badan oo ay arkeen kadib ay go’aan ku gaareen in shaqada ay ka joojiyaan guddoomiyahii maxkamadda sare ee K/galbeed.
Dhanka kale, waxay xubnaha guddiga adeegga Garsoorka K/galbeed ay sheegeen in xilka guddoomiyaha maxkamadda sare ay si KMG ah ugu magacaabeen Sheekh Miidis Maxamed Xuseen, wuxuuna mar uu isna saxaafadda la hadlay uu sheegay in maxkamadda sare aanay ku shaqeyn doonin degmada Afgooye, ayna ku shaqeynayaan magaalada Baydhabo.
Nin Toogasho ku dilay Askari Nabadsugid ah oo Isna La Dilay Duleedka Muqdisho.